Nnwom 71 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ahotoso a nkwakoraa betumi anya
Mede me werɛ ahyɛ Onyankopɔn mu fi me mmofraase (5)
“Sɛ m’ahoɔden so huan a, nnyaw me” (9)
‘Onyankopɔn akyerɛkyerɛ me fi me mmofraase’ (17)
71 O Yehowa, wo na mede wo ayɛ me guankɔbea. Mma m’anim nngu ase da.+ 2 Wo trenee nti twitwa gye me, na gye me nkwa. Yɛ aso ma* me na gye me.+ 3 Bɛyɛ ɔbotantim ma meNa daa manya baabi akɔtɛw. Soma ma obi mmegye me nkwa,Efisɛ wone me botan ne m’abannennen.+ 4 O me Nyankopɔn, gye me fi ɔdebɔneyɛfo nsam,+Gye me fi otirimɔdenfo sisifo nsam. 5 Efisɛ Awurade Tumfo Yehowa, wone m’anidaso;Wo na mede me werɛ ahyɛ wo mu* fi me mmofraase.+ 6 Efi bere a wɔwoo me, wo na mede me ho ato wo so;Wo na wuyii me fii me maame yam.+ Meyi wo ayɛ daa. 7 Me ho yɛ nnipa bebree nwonwa,Nanso minim sɛ wone me guankɔbea. 8 W’ayeyi ahyɛ m’anom ma;+Daa nyinaa meka w’anuonyam ho asɛm. 9 Ntow me nkyene me nkwakoraabere mu;+Sɛ m’ahoɔden so huan a, nnyaw me.+ 10 M’atamfo kasa tia me,Na wɔn a wɔrepɛ me akum me* no bom tu agyina.+ 11 Wɔka sɛ: “Onyankopɔn agyaw no. Muntiw no na monkyere no, efisɛ onni ogyefo.”+ 12 O Onyankopɔn, mma wo ne me ntam nnware. O me Nyankopɔn, yɛ ntɛm bɛboa me.+ 13 Wɔn a wɔne me* di asi no,Ma wɔn ani nwu na wɔn ase nhyew.+ Wɔn a wɔpɛ me sɛe no,Ma womfura aniwu ne animguase.+ 14 Na me de, mɛtwɛn daa;Ayeyi a mede ma wo no, mede bi bɛka ho. 15 M’ano bɛka wo trenee ho asɛm;+Ɛbɛka wo nkwagye nnwuma ho asɛm daa nyinaa,Ɛdɔɔso ara ma merentumi nkan.*+ 16 O Awurade Tumfo Yehowa,Mɛkɔ akɔka wo tumi kɛse no ho asɛm,Mɛka wo trenee ho asɛm; wo nkutoo de na mɛka ho asɛm. 17 O Onyankopɔn, woakyerɛkyerɛ me fi me mmofraase,+Na maka w’anwonwadwuma ho asɛm+ de abesi nnɛ. 18 O Onyankopɔn, sɛ mebɔ akwakoraa na mifuw dwen mpo a, nnyaw me.+ Ma menka wo tumi* ho asɛm nkyerɛ awo ntoatoaso,Na menka wo kɛseyɛ ho asɛm nkyerɛ nkyirimma+ nyinaa. 19 O Onyankopɔn, wo trenee kodu sorosoro;+Nneɛma akɛse na woayɛ;O Onyankopɔn, hena koraa na ɔte sɛ wo?+ 20 Woama mafa amanehunu ne ahohia mu,+Nanso ma minnyina me nan so bio;Ma me so fi bun* mu.+ 21 Ma m’anuonyam nyɛ kɛse,Na bɛbɔ me ho ban na kyekye me werɛ. 22 Ɛno bɛma mede sanku ayi wo ayɛ,O me Nyankopɔn, esiane wo nokwaredi nti.+ O Israel Kronkronni,Mede sankuten bɛto nnwom ayi wo ayɛ.* 23 M’ano bedi ahurusi na ato ayeyi nnwom ama wo,+Efisɛ woagye me nkwa.*+ 24 Me tɛkrɛma bɛka wo trenee ho asɛm* daa nyinaa,+Efisɛ wɔn a wɔpɛ me sɛe no ani bewu, na wɔn anim agu ase.+
^ Anaa “Wone m’ahotoso.”
^ Anaa “wɔne me kra.”
^ Anaa “merentumi mmu ne dodow ano.”
^ Anaa “subun.”
^ Anaa “bɛbɔ nnwom ama wo.”
^ Anaa “bedwinnwen wo trenee ho.”